A�Kheyre oo ka dhex bixi waayay safaaradda Itoobiya & arinta Qalbi dhagax oo waji kale loo yeelayo | Somalimedia
A�Kheyre oo ka dhex bixi waayay safaaradda Itoobiya & arinta Qalbi dhagax oo waji kale loo yeelayo
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warfaafintaA�u sheegay in maalmahaan mashquul badan uu ka jiray Safaaradda Itoobiya ay ku leedahay Magaalada Muqdisho.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo walibo shacabka ay u yaqanaan inay yihiin Wadaniyiin ayaa xalay iyo habeen hore kulamo wada tashi ah la lahaa Saraakiil Itoobiyaan ah, waxaana waqti dambe ay ku gaareen safaaradda dhexdeeda, maadaama arinta Qalbi dhagax ay kacdoon xoogan galisay Shacabka.
Kulamada waqtiga badan qaatay waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa Raa��iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka dhex bixi waayay Safaaradda gudaheeda xalay iyo habeen hore.
Dowlada Itoobiya ma dooneyso in la rido xukuumada Kheyre, sababtoo ah waxay u aragtaa Xukuumad fududeyn karta dano badan oo itoobiya ay ka leedahay Soomaaliya.
Itoobiya ayaa kalsooni badan ku qabta in Xukuumada Soomaaliya ay kaalin muhiim ah ka qaadaneyso hawlgal kasta oo ay ku baacsaneyso dad ay si gaara u raadineyso xitaa Shaqsiyaad kaalin weyn ka qaatay dagaalkii 1977 oo Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeyay.
Raa��iisul wasaare Xssan Cali Kheyre ayaa ku qanacsan qorshaha Itoobiya ay lacago badan ku siineyso qaar ka mid ah Xildhibaanada oo carqaldeyn doona in Golaha Shacabka iyo Aqalka sare ay goa��aan ka soo saaraan Mawqifkii xukuumada ONLF ugu tilmaamtay Argagaxiso, kuna difaacday in Cabdi kariin Qalbi dhagax loo dhiibo Itoobiya.